Federaalizimii Sabdaneessa fi Bilxiginnaa: Xiinxala | Kichuu
Posted on December 12, 2020 by kichuu_admin
Bilxiginnaan faallaa federaalizimiis faallaa dimokraasiis faallaa sabdaneessummaas akka taate dalaga ishee waggaa tokko hin guunne keessatti agarree jirra. Egaa amma maaliif federaalizimii sabdaneessa ijaarra jettee ololtii?
Tokkoffaa: Tibba darbe kallattii gubbaa kennameen raayyaan miidiyaa hawaasummaa bilxiginnaa Oromiyaa akka federaalizimii daadessu kallattiin ta’eera.
Sababni immoo erga Tigraayiin rukutanii as deebi’anii federaalizimii ni diigu warri PP jedhamee waan haasa’amaa jiruuf, kana gara dabarsuun ajandaa sana ofii fudhatanii busheessuufi. Ajandaa diversion godhatanii yeroof itti fayyadamu malee ejjennoon PP, faallaa federaalizimiiti.
Lammaffaa: Filannoo sobaa gaggeessuuf waan murteessaniif hanga filannootti dhimma federaalizimii kana ofitti haa fudhannu kallattiin jedhu kaa’ameera. Ittiinis deeggarsa argachuufi.
Afaanumaan odeessu malee federaalizimii sabdaneessa miti, Oromummaanuu yakka ta’ee jira. Dura Oromoo fi Oromummaaf bakka haa kennani miidiyaalee federaalaa irratti. Ajandaa Amaarummaatu fudhatee jira silaa. Dubbichi namoota karaa walakkaa jiran gowwomsuuf waa’ee federaalizimii kaasaa jirti PPn. Hin gowwomiinaa.
Sadaffaa: Wanti hunduu filannoo booda ta’a. Oromiyaanis kan diigamu filannoo booda malee filannoo dura miti. Heerri federaalaas kukkutamee kan gatamu “From Ethnic based federalism to Ethiopian based federalism” jedhu qorannoon heeraa dhiheenya dhiyaatee Abiyyi approve/mikaneessee sun filannoo booda akka hojiirra oolu ta’eera.
Arfaffaa: Waa’een fedhii addaa Finfinnee irraa Oromoo qabus abjuu taatee hafte. Afaan Oromoos afaan hojii federaalaa akka hin taaneef geessanii afaanota xixiqqoo shan faana walitti hidhani. Kunis abjuudha. Dirree Dhawaa fi Finfinneen akka Amaaraaf tolutti caaseffamaa jirti.
Walumaa galatti, olola PPtiin hin burjaaja’iinaa. Gaaffilee Oromoon kaleessa kaasaa ture dhimma Finfinnee, Afaan Oromoo, Lafa Oromoo, bilisuummaa Oromiyaa, ofiin ofbulchuu/ergamutuu federaalaa ta’uu dhaabuu, mirga namummaa fi dimokraasii, nagaan bahee galuu, hidhaan irraa dhaabbachuu, duuti irraa dhaabbachuu, kan hidhame hunduu hikamuu, hoji dhabummaa/dinagdee keessatti hiree Oromoo, eenyummaa fi aadaa Oromoo guddisuu kabajuu, miidiyaa Oromoo deeggaruun guddisuu, filannoo dimokraatawaa gaggeessuu faa irratti xiyyeeffachuu barbaachisa.FSM irraa
Alamuu Simee fi Awwaluu Abdii Reebaman!
Walitti gaarreffannaan network faayidaan ijaaramee PP damee Oromiyaa keesatti rakkoo guddaa uumeera. Guyyaa 2 dura Alamuu Simee , Awwaluu Abdii fi Adaanech Abeebee Adaamaa, Riizortii Hayilee haaraa sana turan.
Akka odeeffannoo kanaatti galgaluma sana gareen komaandaroota duraanii of keessaa qabu tokko jara bira deemee bakka isaan jiranitti uggure. Konkolaataa fi shufeerota isaanii ega hidhanii booda Adaanech gadiisanii Alamuu fi Awwaluu kaballaadhan rukutanii ragaalee adda addaa isaan harka jirus fudhatanii deeman.
Alamuu Simee fi Awwaluun halkanuma sana konkolaata hoteelichaatin Finfinneetti deebi’anii galan jedha maddi oduu keenyaa. Gareen uggura kana raawwate nama commander Magarsaa jedhamuun kan durfamu yoo tahu gareen kun Damballash fi Shimallis Abdiisaa jalatti faayidaan ijaaramee kan hojjetaa jiruu dha.
Sababaan ugguraa fi reebicha kanaa sirriitti beekamuu baatuus Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasanii nuun rukutuufi oduun jedhu garee PP kana keesatti facaafamaa jira.
Yeroo ammaa PP Oromiyaa keessatti garee gurguddaan 3 faayidaan ijaaramee kan jiru yoo tahu isaanis garee MM Abiyyi Ahimad, garee Shimallis /Damballash fi garee Taakkaleeti. Gareen Adaamatti reebame kun ergama MM Abiyyi Ahimad irraa fudhatee iccitiidhaan qorannoo qondaalota kaanii geggeessaa turuu isaas beekameera.
Note: Suuraan kan duraaniti.
Lolli Bilxiginnaafi TPLf gidduutti adeemsifamaa jiru, lola Sirna Leexaafi Federaalizimii gidduutti
Breaking: Amaarri lafa humnaan qabatee jiru hanga Muddee 30tti gadhiisee akka bahu kallattiin ka’ame.